Nsonaazụ nyocha: Kedu ka ndị ahịa na-azaghachi maka ọrịa na-akpata ọrịa na mkpọchi? | Martech Zone
Ka mkpọchi a kwụsịrị wee nwekwaa ndị ọrụ ọzọ na-alaghachi n’ọfịs ahụ, anyị nwere mmasi n’ịchọpụta ihe ịma aka ndị obere azụmaahịa chere ihu n’ihi ọrịa Covid-19, ihe ha na-eme na mkpọchi mkpọchi iji zụlite azụmaahịa ha, ihe ọ bụla ha mere , teknụzụ ha ji rụọ ọrụ n'oge a, yana ihe atụmatụ na echiche ha maka ọdịnihu.
Otu na Tech.co nyochara obere ulo oru 100 banyere otu ha siri hazie n’oge mkpọchi ahụ.
80% nke ndị nwere obere azụmaahịa kwuru na Covid-19 nwere a mmetụta na-adịghị mma na azụmahịa ha, ma 55% na-enwe mmetụta dị mma maka ọdịnihu
100% nke ndị zaghachirinụ na-eji mkpọchi iji wuo azụmaahịa ha, ebe ọtụtụ n'ime ha na-elekwasị anya ahia, ijikọ na ndị ahịa, na upskilling.
76% nwere nwere nkà n'oge mkpọchi - na SEO, mgbasa ozi mmekọrịta, ịmụ asụsụ ọhụrụ, na nyocha data dịka nka ọhụụ kachasị ọhụrụ iji mụta.
Businesseslọ ọrụ ndị a nyochara sitere na ngwakọta nke ụlọ ọrụ, mana mpaghara ndị a na-ahụkarị bụ ọrụ B2B (28%), ịma mma, ahụike & ahụike (18%), mkpọsa (18%), sọftụwia / teknụzụ (7%), na njem ( 5%).
Ihe Chama Aka Azụmahịa ahụ chere Ihu
Ihe ịma aka ndị kachasị emetụta azụmahịa dị ole na ole (54%), na-esote site na ịmalitegharị ngwaahịa na ihe omume (54%), na-agbasi mbọ ịkwụ ndị ọrụ na ụgwọ azụmaahịa (18%), na-emetụta ohere itinye ego (18%).
Azịza azụmahịa ahụ
Ndị niile azara ajụjụ a kwuru na ha ejirila oge ha mechie ọrụ ha iji bulie azụmaahịa ha.
N'amaghi anya, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ amalitela ilekwasị anya n'ihe ha nwere ike ịnye n'ịntanetị, na iwulite atụmatụ ahịa dijitalụ ha, na ịmepụta ọdịnaya ọhụrụ (88%) na onyinye ntanetị (60%), ijide ma ọ bụ ịga ihe omume ntanetị (60%), ijikọ na ndị ahịa (57%), na upskilling (55%) dị ka ihe ndị kachasị mkpa iji mee mkpọchi.
Fọdụ kwuru na ha ga-enwe ụfọdụ mma ihe si na Covid-19 pụta, gụnyere mmụba nke ahịa n'ịntanetị, ịnwekwu oge iji lekwasị anya n'ahịa, uto na listi nzipu ozi ha, ịmụ ihe ọhụrụ, ịmalite ngwaahịa ọhụrụ, na ịmatakwu ndị ahịa ha nke ọma.
Ọkachamara kachasị ọhụrụ maka ndị mmadụ ịzụlite bụ ịmụ SEO (25%), mgbasa ozi mmekọrịta (13%), ịmụ asụsụ ọhụrụ (3.2%), nkà data (3.2%), na PR (3.2%).
Teknụzụ arụ ọrụ dị oke mkpa na ọganiihu azụmaahịa n'oge a. Mbugharị, WhatsApp, na email bụ ụzọ kachasịsịsị esi ekwurịta okwu na ndị ọrụ, yana azụmaahịa mgbasa ozi mmekọrịta, ịre ahịa email, nzukọ ọgbakọ, yana ịnwe weebụsaịtị ma ọ bụ ụlọ ahịa n'ịntanetị bụ ụdị kachasị mma nke teknụzụ. Imirikiti ejirila mkpọchi iji melite weebụsaịtị ha, yana 60% tweaking saịtị ha dị ugbu a na 25% na-ewu ọhụụ ọhụrụ.
Ndụmọdụ maka ndị obere ụlọ ọrụ
N'agbanyeghị nsogbu ndị chere ihu, 90% zara na ha nwere echiche dị mma ma ọ bụ dị mma maka ọdịnihu nke azụmaahịa ha. Anyị jụrụ ndị zaghachirinụ ka ha nye ndị obere obere azụmaahịa ndị ọzọ ndụmọdụ n'oge a. Ihe ndị a bụ ihe ndị a na-ahụkarị:
Dị mkpa ma na-ebute ụzọ
Na-ebute ihe ị maara nke ọma ụzọ na ịmara ọrụ na-arụ ọtụtụ ndị zara ajụjụ kwuru:
Jiri oge a mee ka ọ dị mma maka ihe ị ma ama.
Joseph Hagen si Streamline PR
Lekwasị anya na ike gị, anwalela oke. Mee ọtụtụ ihe na-arụ ọrụ maka gị n'ihe gbasara nnweta ndị ahịa ma lekwasị anya na nke ahụ. Maka anyị, nke ahụ abụwo ahịa email ma anyị abanyela na ya okpukpu abụọ.
Dennis Vu nke Ringblaze
Nwee nguzozi n’etiti igbutu ego na itinye ego n’ọdịnihu. Hụ nke a dị ka ohere ịmekọrịta, wulite ntụkwasị obi na iguzosi ike n'ihe.
Sara Ahịa si achingnye ọzụzọ Ọrụ N'ezie
Nwalee Ihe Ọhụrụ & Dị Mgbọọgwụ
Ndị ọzọ kwuru na ugbu a bụ oge kachasị mma iji nwayọ, ma zụlite ma nwalee ihe ọhụụ na ndị na-ege gị ntị, ọkachasị n'oge ejighị n'aka.
Agility bụ isi, ihe na-aga ngwa ngwa oge niile na ịchọrọ ileba anya na akụkọ na ọnọdụ, wee zaa ngwa ngwa.
Lottie Boreham nke BOOST & Co
Laa azụ na atụmatụ, iji oge gị mee ihe n'ụzọ amamihe. Nwalee onyinye ọhụrụ dị na ndị ahịa gị dị ugbu a, gbanye ha, wee mee nke mbụ na-ezughị oke.
Michaela Thomas si na Thomas Connection
Chọọ ohere nke pụrụ iche na ọnọdụ ahụ. Anyị na-eme oge kachasị mma site na ịnye ndụmọdụ ụlọ na-akwụghị ụgwọ site na ndị ọrụ ụlọ ọrụ.
Kim Allcott nke Allcott Associates LLP
Ghanụ na ịmara ndị ahịa gị
Mkpa ịmara na ịghọta ndị ahịa gị na mkpa ha gbasiri ike nke ukwuu na ndụmọdụ ndị azụmaahịa nyere. Ulo oru nwere ike iji mkpọchi gbado anya n’ezie iwulite atụmatụ njigide ndị ahịa.
Ọ nwere ike ịdị ka ọ na - emegiderịta onwe gị mana mechie niche gị, kọwaa onye ahịa gị kachasị mma nke ịchọrọ. Chee echiche banyere ha na ihe ịma aka ha ugbu a. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ ha, gịnị ka ị ga-achọ ugbu a? Gbalia hu na ngwa ahia gi ma obu oru aka ya na agwa aziza. Anyị na-emehie nke ikwu banyere anyị mgbe anyị kwesịrị ikwu maka ya na ndị ahịa anyị. ” kwuru
Kim-Adele Platts nke Nchịkwa Executive
Site na B2B, echere m na ọ dị mkpa ịnọgide na-akpọtụrụ ndị ahịa gị ma mee ka ha ghọta na ị nọ ebe ahụ iji nyere ha aka ma kwado ha site n'oge nsogbu a. Yabụ na nke ahụ na-eweta ọdịnaya na-enye aka iji kpoo nsogbu ahụ, ma ọ bụ na-emesi ndị ọrụ ahịa obi ike na ha nwere iji nyere aka ịnagide, ọ dị mkpa ịmepe mkparịta ụka n'oge ma gaa n'ihu na-agwa onye ahịa gị okwu.
Jon Davis nke ụlọ ọrụ tech bụ Medius
Gwa ndị ahịa gị okwu Chọpụta ihe ha chọrọ ka ị mee iji nyere ọnọdụ ha aka. Jiri oge a iji mepụta ọdịnaya dị mma maka ugbu a na maka ọdịnihu n'ihi na oge a agaghị adị ruo mgbe ebighị ebi.
Calypso Rose nke ụlọ ahịa na ntanetị, Indytute
Gbado anya na ire ahia
N'oge ndakpọ akụ na ụba, ụlọ ọrụ na-egbukarị ego. Ọtụtụ mgbe, ọ bụ mmefu ego na mgbasa ozi na-egbutu. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị zoro aka na mkpa dị mkpa nke inweta ahịa gị.
Ndị mmadụ na-emeghe karịa oge ọ bụla inwe mkparịta ụka n'ịntanetị, jiri usoro mgbasa ozi ha, ma jikọọ na ndị ọhụrụ. Zụlite ebe nrụọrụ weebụ dị mma ma dị irè dị mkpa karịa mgbe ọ bụla.
Julia Ferrari, onye mmebe Weebụ
Laghachi n'ịgbalị na-eto eto ugbu a ma chee 'mkparịta ụka ndị m nwere ike ịmalite ugbu a nke nwere ike ịghọ onye ahịa nwere ike ịkparịta ụka na ọnwa 8-10?'. Mkpọchi bụ ohere dị ukwuu iji rụọ ọrụ ogologo oge maka ọrụ ịre ahịa.
Joe Binder nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi WOAW
Ebe nrụọrụ weebụ dị mma bụ isi. Mee ka ọ bụrụ akara nke gị. Gosi ihe akaebe sitere na ndị ahịa iji wulite ntụkwasị obi ma gosipụta na ị maara ihe ị na-eme. Jiri teknụzụ (ogbako vidiyo na ihuenyo-mbak) iji soro ndị ahịa kwukọrịta. Ndị bịara abịa na-enwe ahụ iru ala na ịme azụmaahịa n'ịntanetị. Gosiputa iru gi ma nye azịza nye nsogbu ha. Ọ bụrụ n’inweghị ọkachamara ma ọ bụ chọọ enyemaka na mpaghara ụfọdụ, chọta onye enyemaka ga-enyere gị aka. Anyị na-eji ndị enyemaka enyere aka na ịde blọgụ, ịmepụta eserese, yana njikwa CRM.
Chris Abrams nke Abrams Insurance Solutions
Atụmatụ Ndabere Ndị Ahịa
Tags: mkpọchimarketingahịa azumọrịa